Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Tsy tokony hanapa-kevitra amin'ny alalan'ny mpitsara voatendry ho azy ny demokrasia
"Tsy misy modely raikitra amin'ny demokrasia," hoy i Shina tao amin'ny antontan-taratasy ofisialy nivoaka tamin'ny sabotsy izay nanamarika ny ezaka demokratika ataony, ary ny hoe demokrasia ve ny firenena iray dia "tokony eken'ny fianakaviambe iraisam-pirenena, fa tsy fanapahan-kevitry ny mpitsara vitsivitsy notendren'ny tenany manokana. ”
Ny demokrasia, ilay taratasy fotsy mitondra ny lohateny hoe “Shina: Democracy That Works” dia nilaza fa “filamatra” izay nankamamian'ny Antoko Komonista Shina (CPC) sy ny vahoaka Shinoa hatramin'izay.
“Tao anatin'ny zato taona lasa, nitarika ny vahoaka ho amin'ny fanatanterahana ny demaokrasian'ny vahoaka ao Shina ny Antoko. Tena mitana ny hoaviny sy ny fiaraha-monina ary ny firenena tokoa izao ny Sinoa”, hoy ilay gazety.
Nantsoin'i Shina hoe “demokrasian'ny vahoaka manontolo” i Shina, taorian'ny nanoloran'ny filoha Xi Jinping ilay foto-kevitra roa taona lasa izay tao an-tanànan'i Shanghai. Io foto-kevitra io dia manome ara-dalàna ny fandraisan'ny vahoaka anjara amin'ny hetsika ara-politika isan'andro amin'ny ambaratonga rehetra, manambatra ny fifidianana demokratika, ny fifampidinihana ara-politika, ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fanaraha-maso.
Ny satan'ny vahoaka amin'ny maha-tompon'ny firenena azy no fototry ny demokrasian'ny vahoaka, hoy ny antontan-taratasy navoakan'ny Biraon'ny Filankevi-panjakana ao Shina.
'Manana fomba fanao mivaingana sy pragmatika ny demokrasia ao Shina'
“Any Shina, ny fanao mahazatra dia ny mandre ny feon'ny olona, ​​manao zavatra araka izay ilainy, ary mampifangaro ny heviny sy ny tanjany,” hoy ilay antontan-taratasy.
Araka ny angon-drakitra ofisialy, nanao fifidianana mivantana 12 ho an'ny kaongresin'ny vahoaka ao amin'ny kaominina i Shina ary fifidianana mivantana 11 ho an'ireo ao amin'ny distrika, miaraka amin'ny tahan'ny fandraisana anjara amin'izao fotoana izao eo amin'ny 90 isan-jato, hatramin'ny nanombohan'ny fanavaozana sy ny fisokafana.
Ny fifampidinihana demokratika dia singa manokana amin'ny demokrasia ao Shina. Mampiasa ny zony hifidy amin'ny fifidianana ny vahoaka Shinoa ary manao fifampidinihana lalina alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra lehibe.
Nohamafisin’ilay gazety ihany koa fa ny fanararaotam-pahefana ho an’ny tombontsoa manokana dia fongotra amin’ny alalan’ny fanaraha-maso ara-demokratika tsara sy mahomby.
Miitatra amin’ny faritra rehetra sy amin’ny lafiny rehetra ny fanaraha-maso ny fahefana, hoy izy.
Modely manokana momba ny demokrasia an'i Shina
Raha tokony haka tahaka tsotra fotsiny ny maodely demaokratikan'ny hafa i Shina, dia maka ny “toe-javatra iainany sy ny zava-misy iainany” i Shina ary maneho ny fahamarinany.
“Misarika ny zava-bita ara-politika tsirairay avy any amin'ny firenena hafa i Shina, saingy tsy maka tahaka na dia iray aza amin'ireo modely demaokrasiany”, hoy ilay antontan-taratasy. "Ny modely mety indrindra dia ny mety indrindra."
Mifanaraka amin'ireo endri-javatra miavaka ao amin'ny firenena ny demokrasian'ny olona mizotra manontolo, ary mitaratra amin'ny fotoana iray ihany koa ny “fanirian'ny olombelona rehetra ny demokrasia”.
Tsy hifarana mihitsy ny fikatsahana sy ny fanandraman'ny olombelona ny demokrasia lehibe kokoa, hoy ilay gazety.
Ny tena sakana ho an'ny demokrasia dia tsy ao amin'ny maodely samihafa amin'ny demokrasia, fa amin'ny fiavonavonana, ny fitsarana an-tendrony ary ny fankahalana ny fiezahan'ny firenena hafa hikaroka ny lalany mankany amin'ny demokrasia, ary amin'ny fiheverana ny fahamboniana sy ny fahatapahan-kevitry ny hametraka ny modelin'ny demokrasia ho an'ny hafa, nanampy izany.